Jwxo-shiil, oo 16 Taageerayaashiisa ah Guri ku Shiriyey – Rasaasa News
Jwxo-shiil, oo 16 Taageerayaashiisa ah Guri ku Shiriyey
December 31, 2011 [ras] – “Guul guul xornimadii aan doonaynay waa la inoo ogolaaday” sidaas waxaa shir ka yidhi Jwxo-shiil, kol uu taageerayaal tira yar kula hadlayey guri ay ku kulmeen 22 December 2011.
Labadii todobaad ee ina dhaafay, hadalhaynta ugu badnayd qurba joogta Somalida Ethiopia, ayaa ahayd kooxda Jwxo-shiil, oo heshiis nabadeed la galayso dawlada Ethiopia. Waxaana ay dadka qaar ka dhigayeen arinka run, iyaga oo sheegay in wasiiro Somali Kenyan ah ay wada xaajood kula qaateen dhismaha safaarada Kenya ee London. Arintaas oo aan hore u baahinay in ayna sinaba suurto gal u ahayn, warar xaqiijiyana aan wali la helin.
Waxaanu muran ka taagnayn in ay jiraan dad wada sulux sokeeyenimo, oo jecel in maro la saaro Jwxo-shiil iyo kooxda. Sida dhabta ah, waxaa London tagay nin Somali Kenyan ah oo hore masuuliyad uga qabtay Kenya, haatanse aan wax xil ah u hayn dawlada Kenya. Ninka la sheegay inuu u kala dab qaaday masuuliyiinta Somali Kenyanka ah iyo Jwxo-shiil, ayaa xan ku sheegay ogolaanshaha kooxda iyo shuruudaha.
Waxay kooxdu waday todobaadyadan oo dhan shirar, kuwaas oo labo micne lahaa; war galin taageerayaasha waxa ay ka qabaan nabad laga helo Ethiopia iyo dhiiri galin taageerayaasha in ay kooxdu wali ka jirto qurbaha, in kasta oo ay xididada kala baxday gudaha gabalka Ogaden.
Waxaa jirtay in Jwxo-shiil, bishii December 22, 2011 uu kula kulmay London dad yar oo taageerayaashiisa ah, waxaana uu u sheegay in loo ogolaaday wixii ay u dagaalamayeen. Kaas oo ahaa, in marka ay la kulmayaan Ethiopia ay goob joog ahaadaan dad markhaati ah, Jwxo-shiil, wuxuu yidhi “waa nalaga yeelay arintaas,” laakiin ma sheegin cida goob joog noqon doonta iyo waxa ay goob joog ka ahaan doonto.
Dadka shirka yimid oo ay tiradoodu ahayd 16 ruux, kolkii uu hadalkaas yidhi Jwxo-shiil way sacabiyeen, wayna mashxaradeen, waxayna qolka ka soo baxeen iyaga faraxsan oo leh waan xorownay.
Arinka kale ee uu taageerayaashiisa 16ka ah u sheegay Jwxo-shiil, waxay ahayd in heshiiska ka dib, afti la laga qaadi doono sidaasna laggaga go,ayo Ethiopia.
“Q13 ee dastuurka dalka Ethiopia ayay hawraartaasi ku qoran tahay.”
Waxay wararku sheegayaan sifo kasta ha loo maro, laakiin in ay jirto asturaad ay ku kala qaybsan tahay kooxda Jwxo-shiil, walina lama oga in waxa socdaa noqon doono heshiis dhab ah iyo in ay kooxdu dhax ka boodo samayn doonto.
Waxaa laga shin tirinayaa kulan ay kooxdu isugu tagi doonto dalka Jarmalka kaca hore ee bisha January 2012.
Dhinaca kale, 28 December 2011, wuxuu shir uga furmay Jijiga ururka ONLF,ee nabada qaatay, shirkaas oo la filayo in uu ugu diyaar garoobayo ururku soo dhawaynta kooxda Jwxo-shiil hore uga falaagowday, oo laga sugayo Jijiga dhamaadka bisha ugu horaysa sanadka soo socda.
Warar aanaan wali xaqiijin ayaa sheegaya in bisha dabayaaqada bisha Jaunary 2012 xaflad soo dhawayn ah loogu qaban doono hoolka shirarka ee Sayyid Maxamed Cabdille Xasan xubnaha ka iman doona kooxda Jwxo-shiil.
Waxaa la sheegayaa in Jwxo-shiil nabad uu la qaato Ethiopia ku xidhay labo shardi; A) in la siidaayo Bashiir Axmed Makhtal B) in loo celiyo Jwxo-shiil lacagtii lagu qabtay Bashiir. Arintaas oo ay Ethiopia ku gaabsatay waxba xumaan maayo.
Bashiir, waxaa uu sheegay in uu ahaa ganacsade Canadian ah, kolse hadii ay kooxdu shuruud ka dhigtay waxay noqon in dib maxkamad loo saaro, si loo gaadho runta.
Waxaa kale oo iyana jirta in la arkayo xubno kooxda ka mid ah oo wadamada Yurub qaarkood samaynaya ficilo xun oo lacag uruursi ah, iyaga oo dadka albaabada ku garaacaya.
Si kastaba arimuhu ha ahaadaane, waxaa hubaal ah in ay jiraan xubno diidan naf lacaarinimada, oo door bidaya in la waayo magacooda iyo meel ay ku dambeeyaan midna, lamana hubo in ay arintaa isku raaci doonaan iyo in kale.
Wakaalada Jidadka Ethiopia oo Codsatay in la Kordhiyo Xisaabta ay Haysato